नेपाल आज | ८ वर्षदेखि अलपत्र 'मेरो सिटी हाउजिङ'को विषयमा समाचार सम्प्रेशण नगर्न दवाव
व्यापार नेपाल आज बिशेस
८ वर्षदेखि अलपत्र 'मेरो सिटी हाउजिङ'को विषयमा समाचार सम्प्रेशण नगर्न दवाव
कहिले निर्माण हाेला मेरो सिटी हाउजिङ ?
आइतबार, २५ चैत २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (NP)
ललितपुर । 'मेरो सिटी हाउजिङ' निर्माण कम्पनी रोयल ओर्चिड डेप्लपर प्राइभेट लिमिटेडले समाचार सम्प्रशेण नगर्न दवाव दिएको छ । ३ वर्षमा निर्माण सक्ने सम्झौता भएको ‘मेरो सिटी हाउजिङ’ ८ वर्षमा पनि सकिएन भन्ने समाचार नेपालआजले सम्प्रेशण गरेको थियो ।
समाचार सम्प्रेशणपछि कम्पनीले उपभोक्तालाई मिडियालाई किन प्रयोग गरिएको भन्ने प्रश्न गरेकाे एक उपभाेक्ताले नेपाल अाजलार्इ बताए । तीन वर्षमा निर्माण कार्य सक्ने गरी ललितपुरको हात्तीवनस्थित हरीसिद्धिमा रोयल ओर्चिड डेप्लपरलले सन् २०१० मेरो सिटी हाउजिङ निर्माण सुरु गरेको थियो ।
गजवको कुरा त के भने ३ वर्षमा हाउजिङ निर्माण सक्ने भनेको रोयल ओर्चिडले ८ वर्षमा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकेको छैन । तर पनि कम्पनीले हाउजिङको निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइको विषयलाई लिएर मिडियामा नजान उपभोक्तालाई दबाब दिँदै आएको छ ।
नेपालआजले यस विषयमा बुझ्नाका लागि कम्पनीका अधिकारिक व्यक्ति विशाल अग्रवाललाई सम्पर्क गरेको थियो । हाउजिङ निर्माण कार्य भइरहेको र समयमै निर्माण सकिने बताउँदै उनले पनि यस विषयमा मिडिया पछि नलाग्न धम्क्याएका थिए । ‘निर्माण कार्य जारी छ’ विशाल अग्रवालले भने ‘तपाईंहरु यस विषयको पछि नलाग्नुहोस् ।’
नेपालआजले सोधेका प्रश्नको उत्तर नै नदिएर विशाल फोन बन्द गरेका थिए । उपभोक्ताका अनुसार कम्पनीका मालिक गणेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन छन् । गणेशको सम्पूर्ण काम उनका भतिजा विशालले हेर्दैआइरहेका छन् ।
उपभोक्ताका अनुसार यसअघि पनि कम्पनीले हाउजिङको विषयलाई लिएर मिडिया नजान बारम्बार दबाब दिँदै आइरहेका थिए । मिडियामा गए बैंकले ऋण प्रवाह रोक्ने भएकाले हाउजिङ निर्माण कार्यलाई रोक्न आफूहरु बाध्य हुने भन्दै कम्पनीले उपभोक्तालाई दबाबमा राखेको हो । जवकी कम्पनीले उपभोक्ताबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उठाइसक्नुका साथै तीन वर्षमा निर्माण गर्ने भनिएको हाउजिङ आठ वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय खरिदकर्ताहरु एकीकृत भएर कम्पनीलाई हाउजिङ निर्माणका लागि दबाब दिन थालेपछि भने कम्पनीले हाउजिङ निर्माण गर्न थप १६ महिनाको समय अवधी माग गरेको छ । तर, आठ वर्षमा निर्माण पूरा हुन नसकेको ‘मेरो सिटी हाउजिङ’ अवको १६ महिनामा सम्पन्न हुनमा आशंका व्यक्त गर्दछन् । ‘यो उपभोक्तालाई झुलाएर राख्ने कर्मकाण्ड मात्रै हो’ एक उपभोक्ताले भने, ‘८ वर्षमा पूरा हुन नसकेको काम अवको १६ महिनामा कसरी सम्भव हुन्छ ? यो सिधै उपभोक्तालाई ठगी गर्ने मनसाय हो ।’
स्रोतका अनुसार उपभोक्ताहरु निर्माण पक्षसँग पटकपटक बैठक बसी निर्माण कार्यलाई सयममा सक्न, नसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको विषयलाई स्पष्ट रुपमा लेखेर दिन मार्ग गर्दै आएका छन् । तर कम्पनीले मौखिक रुपमा समयमा हाउजिङ निर्माण कार्य सम्पन गर्ने भन्दै लिखितमा दिन तयार देखिएकाे छैन । गत मंगलबार मात्रै उपभोक्तासँगको छलफलका क्रममा कम्पनीका तर्फबाट आएका वकिल प्रशुराम कोइराला र विशालले हाउजिङ निर्माण कार्य समयमै सम्मपन्न हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए ।
कम्पनीले तीनवटा भवनमा १८ लाख ३५ हजारदेखि ५४ लाख ४४ हजारसम्मका तीन सय पाँच वटा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न लागेको हो । स्रोतका अनुसार दुई सयभन्दा बढी अर्पाटमेन्ट विक्रि भइसकेको छ । आपर्टमेन्ट खरिदकर्ताले ९० प्रतिशत रकम कम्पनीलाई बुझाइसकेका छन् ।
ललितपुर मेरो सिटी हाउजिङ दवाव रोयल ओर्चिड हात्तीवन